Gachon University - Kudzidza muSouth Korea. Higher Education Kunze Kwenyika
guta : Seongnam
inotangwa : 1939
Musakanganwa kuti discuss Gachon University
A yunivhesiti iri musha, nzvimbo mudzidzi ave nenjere ari pautsva nezivo nenjere. Nepo Kubudirira yunivhesiti kuti kunobva unhu uye ramangwana nokubudirira yevadzidzi ayo, Kubudirira kwakadaro hakuna inosimbiswa.
The yunivhesiti anofanira kusika yakanakisisa inobvira zvakatipoteredza dzidzo, apo mukana vadzidzi vanogona maruva.
Kunyange zvazvo Gachon University achigura vamwe dzakaoma kare, isu makavakunda nechiratidzo mutsva zvokuchinja yunivhesiti kuva repamusoro inisitichusheni.
Isu takanga wokutanga yunivhesiti Korean kuti uvhure College BioNano Technology, iyo akava nyaya muenzaniso wakanaka kune vamwe madhipatimendi.
Pandakabhabhatidzwa atarisire yokudzora wepaYunivhesiti, Ini nezvikanda kuti “Gachon University aizova mumwe 'Top 10 Private Africa’ munyika mukati mumakore mashomanana.”Havaiti ndimire chipikirwa ichi, Ini achazvirangarira mberi, uye nechokwadi chokuti yunivhesiti anova mumwe munyika zvikuru nomukurumbira masangano.
Ndinovimba kuti vose avo kushanyira Homepage ichi ichaona pamwe Gachon University anoona kuti kukura uye kubudirira remakore rechi21.
Kunyange zvazvo kwave chete kwave 20 makore kubva pakuvambwa kwayo, Gachon University wanyatsonzwisisa somunhu pose mbiri yunivhesiti iri pedyo zvikuru remangwana.
Gachon University akasikwa somugumisiro ane kwemapazi vaviri-gore 4 mumayunivhesiti, inova nyaya yakadaro batanidzo muKorea rokutanga. Yakakurudzira zvakaratidzwa yenguva yemberi kuitira kurondedzera remangwana maonero wechikoro, uye yabatanidza simba nhengo dzose University uye nokudaro Kunowanzurudza ari Mubatanidzwa anokonzerwa kwemapazi.
Pachishandiswa huripo zvakaratidzwa chikoro–“Dzichiri matarenda pose vane hunhu”–ari paradigm itsva yave vataurira kuita zvinangwa chechikoro chitsva–“Kuva mumwe pamusoro 10 pose aigona mumayunivhesiti kubudikidza 2020”–uye kutanga chaiwo urongwa University.
Dept. of Accounting & mutero
Dept. of International Trade & komesi
Dept. of Mathematics & ruzivo
Dept. of Software Design & utariri
College of Arts & patani
Dept. of Food & udyo
Unoda discuss Gachon University ? chero mubvunzo, Mashoko kana wongororo